FIFANINANANA SARY :: Fabrice Rabariniriana no nandrombaka ny laharana voalohany • AoRaha
FIFANINANANA SARY Fabrice Rabariniriana no nandrombaka ny laharana voalohany
Niteny ny sary. Lasan’i Fabrice Rabariniriana ny laharana voalohany tamin’ilay hetsika “Mois de la photo” notanterahina nandritra iny volana novambra iray manontolo iny. Tetsy amin’ny La City Ivandry no nanaovana ny lanonana famaranana sy ny fizaràna ny mari-pankasitrahana, ny alin’ny zoma teo.
Niisa dimy ambin’nyy folo ireo mpifaninana nifampikatroka nandritra ny hetsika. Nahay nandresy lahatra ireo mpifidy tamin’ny sarina Baobab anefa i Fabrice Rabari­niriana ka izy no nibata ny loka tamin’ity lanonana “Mois de la Photo”, andiany fahasivy ity. Fitsangantsanganana amin’ny alalan’ny “Navette Tsingy” mankany Belo Tsiribihina no loka nomena azy tamin’izany.
“Voaporofo nandritra ity hetsika “Mois de la Photo” ity fa nahafa-po ny rehetra ny sanganasako. Hikarakara fampirantiana no tanjoko aorian’izao saingy mbola miezaka ny mitady mpanosika ny lalam-bola ao”, hoy izy milaza ny fandaharam-potoanany manaraka. Tsara ny mampahatsiahy fa manodidina ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao malagasy manerana ny Nosy no lohahevitra nandritra ity andiany faha-9 ity.
MOZIKA SY KOLONTSAINA :: Voasoratra anatin’ny lisitry ny vakoka iraisam-pirenena ny “Reggae”
SEHO « ROCK LEGENDS » :: Hamelona ny sanganasan’ireo tarika kalaza any ivelany ny Mage 4